Liverpool oo aad ugu dhow inay Arsenal ku garaacdo saxiixa xiddig Portuguese ah – Gool FM
(Liverpool) 15 Luulyo 2021. Wararkii ugu dambeeyay ee dhanka suuqa kala iibsiga ayaa sheegaya in kooxda Liverpool ay ku dhowdahay saxiixa xiddiga khadka dhexe kaga ciyaara naadiga Lille ee Renato Sanches.
Kubbad qaabeeyaha xulka qaranka Portugal ayaa qaab ciyaareed heer sare ah kusoo bandhigay horyaalka Ligue 1 xilli ciyaareedkii hore isagoo kooxdiisa ka caawiyay inay hanato horyaalka Faransiiska.
Wargeyska kasoo baxa dalka Faransiiska ee Le10 Sport ayaa maalmihii lasoo dhaafay Sanches la xiriirinayay kooxaha Arsenal iyo Tottenham, balse warsidaha Todo Fichajes ayaa haatan daabacay in Reds ay wada xaajood miro dhal ah la sameysay dhiggeeda Lille sidaaa darteedna ay ku dhowdahay dhammeystirka saxiixa 23-sano jirka khadka dhexe ka ciyaara oo ay kusoo qaadaneyso 37 milyan oo euro.
Warsidaha xogtan qoray ayaa intaas ku daray inay Liverpool sameyn doonto saxiixyo kale, balse diiradda ay saarayaan dhammeystirka heshiiska ay kusoo qaadanayaan Renato Sanches si uu daboolo baahiyaha khadka dhexe maadaama uu kooxda isaga tagay Giorginio Wijnaldum, sidoo kalena aanan la hubin mustaqbalka Thiago Alcantara, Naby Keita iyo Alex Oxlade-Chamberlain.
Paul Pogba oo aad ugu dhow inuu baahiyo go'aanka mustaqbalkiisa... (Miyuu ka tagayaa Manchester United?)
RASMI: Arjen Robben oo markiisii labaad ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubadda cagta